နေ့ခင်းနေ့လည် ထမင်းအဆီတက်လာပြီဆိုရင် ဒါလေးတွေနဲ့လန်းဆန်းအောင် လုပ်ကြမယ်… – Trend.com.mm
ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်မှ မသောက်ရရင် တစ်ခုခုလိုနေသလိုခံစားရပြီလား? အိပ်ချင်ပြီဆိုတာနဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေသောက်ပြီး ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်တက်ကြွအောင်လုပ်နေရပြီလား?အမြဲတမ်း ဒီအချိုရည်တွေသောက်မှ စိတ်လန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် မဖြစ်သေးဘူးနော်.. အခြားကိုယ့်အတွက် ထိရောက်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ စမ်းသုံးကြည့်ရအောင်လား။သင်ဟာ ကော်ဖီတွေ ၊ အားဖြည့်အချိုရည်တွေကို ဆက်အားမပေးချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဒါလေးကို ဆက်ဖက်ကြည့်ပါ. . .
အရသာကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ၊မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ အရမ်းငိုက်စင်းနေပြီ ၊ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်တောင်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် လီမွန်သီးဖြစ်ဖြစ်၊ သံပုရာသီးဖြစ်ဖြစ် တစ်ကိုက်လောက် ကိုက်ချလိုက်ပါ။ ချဉ်စူးပြီး အိပ်ချင်နေတဲ့စိတ်တွေ လုံးဝထွက်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်။
မျက်ခွံတွေ လေးလံကျလာပြီဆို ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ ရေအေးနဲ့မျက်နှာကို အဆက်မပြတ်သစ်ပေးတာက သင့်ကိုနိုးကြွစေပြီး အားအင်လည်းပြန်လည် တက်ကြွစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရေခဲတဲုးဆောင်ထားပါ။ ရုံးမှာ ရေခဲသေတ္တာရှိရင် အဆင်ပြေတာပေါ့။ ရေခဲတုံးတွေနဲ့ ဂုတ်ကိုကပ်ပေးရင်လည်း အိပ်ချင်ပြေစေပါတယ်။
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ မျက်နှာသစ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်ကိုလည်း ရေအေးနဲ့ထိတွေ့ပေးတာက အေးမျှမှုရှိတာကြောင့် စိတ်ကိုပြန်လည် လန်းဆန်းစေပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ အရင်ကဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးတွေ အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်နေရင်းအိပ်ငိုက်လာရင် နားရွက်ကို နာနာလေးဖြတ်ညှစ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အဓိကနေရာကို ထိမိသွားတဲ့အခါ အိပ်ချင်စိတ်တွေကိုထိန်းချူပ်ပြီး နိုးကြွစေပါတယ်။
အိပ်ချင်လာရင် ကော်ဖီထမဖျော်ပါနဲ့။ စက္ကန့်၃ဝလောက် ပျင်းကြောဆန့်လိုက်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာပဲဆန့်ပေးပါ။ အိပ်ချင်တယ်လို့ ခံစားရပြီဆိုတာနဲ့ တောင့်တင်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကြောတွေကို ဖြေလျော့ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်။
ကျောဖီလေးတဈခှကျမှ မသောကျရရငျ တဈခုခုလိုနသေလိုခံစားရပွီလား? အိပျခငျြပွီဆိုတာနဲ့ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှသေောကျပွီး ကိုယျ့စိတျ ကိုယျတကျကွှအောငျလုပျနရေပွီလား?အမွဲတမျး ဒီအခြိုရညျတှသေောကျမှ စိတျလနျးအောငျလုပျလို့ရတယျဆိုရငျ မဖွဈသေးဘူးနျော.. အခွားကိုယျ့အတှကျ ထိရောကျမယျ့နညျးလမျးလေးတှေ စမျးသုံးကွညျ့ရအောငျလား။သငျဟာ ကျောဖီတှေ ၊ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှကေို ဆကျအားမပေးခငျြတော့ဘူးဆိုရငျ ဒါလေးကို ဆကျဖကျကွညျ့ပါ. . .
အရသာကို ကွိုကျသညျဖွဈစေ ၊မကွိုကျသညျဖွဈစေ အရမျးငိုကျစငျးနပွေီ ၊ ကိုယျ့အခွအေနေ ကိုယျတောငျမထိနျးနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျ လီမှနျသီးဖွဈဖွဈ၊ သံပုရာသီးဖွဈဖွဈ တဈကိုကျလောကျ ကိုကျခလြိုကျပါ။ ခဉျြစူးပွီး အိပျခငျြနတေဲ့စိတျတှေ လုံးဝထှကျပွေးသှားပါလိမျ့မယျ။
မကျြခှံတှေ လေးလံကလြာပွီဆို ရအေေးအေးလေးနဲ့ မကျြနှာသဈလိုကျပါ။ ရအေေးနဲ့မကျြနှာကို အဆကျမပွတျသဈပေးတာက သငျ့ကိုနိုးကွှစပွေီး အားအငျလညျးပွနျလညျ တကျကွှစပေါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ ရခေဲတဲုးဆောငျထားပါ။ ရုံးမှာ ရခေဲသတ်ေတာရှိရငျ အဆငျပွတောပေါ့။ ရခေဲတုံးတှနေဲ့ ဂုတျကိုကပျပေးရငျလညျး အိပျခငျြပွစေပေါတယျ။
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ထိရောကျတဲ့နညျးလမျးပါ။ မကျြနှာသဈပွီး လကျကောကျဝတျကိုလညျး ရအေေးနဲ့ထိတှပေ့ေးတာက အေးမြှမှုရှိတာကွောငျ့ စိတျကိုပွနျလညျ လနျးဆနျးစပေါတယျ။
ဒီနညျးလမျးကတော့ အရငျကဗုဒ်ဓဘုနျးကွီးတှေ အသုံးပွုတာဖွဈပါတယျ။ တရားထိုငျနရေငျးအိပျငိုကျလာရငျ နားရှကျကို နာနာလေးဖွတျညှဈပေးတတျကွပါတယျ။ အဓိကနရောကို ထိမိသှားတဲ့အခါ အိပျခငျြစိတျတှကေိုထိနျးခြူပျပွီး နိုးကွှစပေါတယျ။
အိပျခငျြလာရငျ ကျောဖီထမဖြျောပါနဲ့။ စက်ကနျ့၃ဝလောကျ ပငျြးကွောဆနျ့လိုကျပါ။ ဖွညျးဖွညျးလေးနဲ့ သကျတောငျ့သကျသာပဲဆနျ့ပေးပါ။ အိပျခငျြတယျလို့ ခံစားရပွီဆိုတာနဲ့ တောငျ့တငျးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအကွောတှကေို ဖွလြေော့ဆနျ့တနျးလိုကျပါ။ တကယျထိရောကျပါတယျ။